Mhlawumbe abaningi wake amadamu ezahlukene. Kuyamangaza ngempela, ngoba enjalo imizimba amanzi ungomunye kwekulu. amachibi okunjalo zidalwe eyayenziwe, ngakho uhlale ezithakazelisayo ukubona abenziwe ngayo. Inani elikhulu kubo zitholakala eRussia, futhi kubalulekile ukunaka Voronezh Reservoir. Kulesi sihloko sizoxoxa ngalokho ke idume, ngokungafani nezinye machibi, kanye izici zayo kanye nezinye amaqiniso ezithakazelisayo.
Voronezh Reservoir: ulwazi olujwayelekile
Ngakho, kubalulekile ukuba zifunde okwengeziwe ngale ndawo. Itholakala ku Voronezh esifundeni, phezu River Voronezh. Kungani ngempela lo kwesigubhu uzekwayo kangaka? Impendulo ulula: kuba enye yezindawo ezinkulu kakhulu emhlabeni. Ngempela, Ubukhulu kwesigubhu kukhona amazing: ihlanganisa indawo 70 amakhilomitha square. Ngokuvamile ezingxoxweni Voronezh izakhamizi ungezwa ukuthi ambize ngokuthi "ulwandle Voronezh".
Usuku ingxenye yemfundo yakhe - 1971-1972 GG. Kwesigubhu sidalwe edamini. Kazi yayiyini injongo indalo yakhe? Ngokuyisisekelo lwenzelwe zezimboni yokuphakela amanzi edolobheni. Lapha kwakukhona ngempela inqwaba yezinkinga ezihambisana nge ukungcola kwamanzi namandla. Ukuze ugweme ukuqhubeka le nqubo, salungisa operation ekhethekile okuhloswe ngaso asuse.
Ngakho, imininingwane eyisisekelo yaleli umzimba ngamanzi. Manje kubalulekile ukuxoxa le nkinga, njengoba indawo Voronezh Reservoir. Njengoba kushiwo ngenhla, kuba Voronezh esifundeni, Voronezh idolobha wesifunda. Okunabileko Kuyaphawuleka ukuthi itholakala ngokuphelele phakathi komkhawulo edolobheni. Lokhu kuchaza ukuthi kwenzeka ukungcoliswa yayo eqinile.
Nokho, umzimba amanzi exhunywe ubuhle kulezi zindawo okungavamile. Nasi uhambo nice yiluphi usuku futhi ujabulele isimo esizolile. Kusukela amabhange inikeza ukubuka indawo ekhangayo phezu komkhathi enkulukazi yamanzi, kusale umbono ongenakulibaleka. Abantu abaningi beze lapha ngenjongo ukuphumula, futhi amanye aze ngisho uthanda nifuna ukuyodoba lapha. Ngelilodwa nje, kubalulekile ukuba uvakashele Voronezh Reservoir. Izithombe zalesi kwesigubhu kungabonakala kulesi sihloko.
Ogwini kwesigubhu kungabonwa ngaphezu Voronezh nezinye zokuhlala, ezifana nemizana ezifana Maslivka futhi Tavrovo. Manje kakade Voronezh.
Ngakho, siye sacabangela endaweni lapho emanzini amaningi. Yiqiniso, lokhu kwenza ukwazi ubukhulu kwesigubhu ukuze simele ngokuqondile ezidlula yayo. Njengoba sekuphawuliwe, Voronezh Reservoir yaziwa njengenye omunye amadamu elikhulu lolu hlobo emhlabeni. Manje kufanele ishiwo lingakanani e izibalo ukhonkolo. endaweni yaso, njengoba kushiwo, sq 70. km. Umqulu kwesigubhu - cubic metres abangaba yizigidi ezingu-204. m Uma sikhuluma ngezinga yayo, singasho ukuthi ubude bayo imayelana 30 km, ububanzi -. okuyisilinganiso sabangu-2 km. Abantu abaningi abathanda futhi Voronezh kwesigubhu ukujula. It kakhulu incike indawo. Ukujula enkulu, okuyinto bhalisiwe lapha - 16,8 m, ukujula avareji -. Mayelana 2.9 m Kufinyeta, kungase kuqashelwe ukuthi ukujula siyahluka kakhulu ezingxenyeni ezahlukene kwesigubhu, futhi ngezinye izikhathi kunezindlela indawo ijulile kakhulu.
Yayiyini kule ndawo ngaphambi kokudalwa kwesigubhu?
Ngakho, Kwabikwa ngobukhulu kwesigubhu futhi indawo yayo. Manje kubalulekile ukuba banake umlando endaweni lapho likhona. Ngaphambili kwisayithi, manje Voronezh Reservoir emfuleni Voronezh. Phakathi nokubusa uPetru Ngaqala ukukhiqizwa emikhulu yempi ukuba ogwini lwayo. Kule ndaba, omningi amahlathi phezu amandla ngamanzi osebeni lwemifula yayingasebenzi. Ngebanga lalokho, lokhu okuye kwathinta isimo emfuleni bomile futhi kuba kubonakale engajulile. Khona-ke umfula wanquma ngisindise kusukela omiswe ephelele, futhi kwanqunywa ukuba kwakhiwe esangweni indlela ekhethekile, okuyinto waba ngowokuqala emhlabeni. Ngenxa yalesi emfuleni baba osanda kwabacebile efanelekayo lokuthumela.
Ngenxa yezizathu zokuvikeleka okukhulu, idamu sokhuni sluice Yakhiwa esizeni confluence we Umthambo. Okunabileko Kuyaphawuleka ukuthi idamu usekhonze isikhathi eside kakhulu, kuze kube ngo-1931. Naphezu impilo ende kangaka, yena zabhuntsha eside ngaphambi okwamanje uma isusiwe. Insimu emhlabeni kwaba ixhaphozi yangempela.
Izizathu ukudalwa kwesigubhu
Ngaphandle edamini agugile ngaleso sikhathi kwakukhona izimfanelo ambalwa esengeziwe ukudalwa kwesigubhu kule ndawo. Ngo-30 yalolucwaningo ka XX leminyaka baqala ukuthuthukiswa esebenzayo ye Voronezh, idolobha wavula eziningi amabhizinisi ezimbonini. Kule ndaba, amanzi ukusetshenziswa emzini liye landa ngokuphawulekayo. Ukuze uxazulule le nkinga, kwahlongozwa 2 ongakhetha. Omunye wabo abathintekayo izikhukhula, kanye nezinye - nkinga. Ngemva kwemithandazo nezingxoxo eziningi namanje wakhetha ukhetho lokuqala. Kwanqunywa ukwakha idamu 10 km ukusuka edolobheni. Nokho, kusukela ngesikhathi sempi kuvikela lawo izinhlelo. Voronezh yabhidlika kabana ku ifake isandla ekubuyiselweni kwalo kwathatha iminyaka engaba ngu-15. Naphezu kwalokhu, ngo-1967 iziphathimandla wabuya umqondo wokwakha kwesigubhu.
Voronezh Reservoir: umlando ekudalweni futhi ukwenzangcono
Ngakho, ukwakhiwa uqalwe 1967. Umsebenzi ukudalwa kwesigubhu kwenziwa ngesikhathi esihamba phambili. Ekuqaleni indalo yayo kuphrojekthi labelwa eminyakeni engu-15. Nokho, ukwakhiwa kwenziwa eminyakeni engu-3. Lokhu kwabangela izinkinga eziningi, okuyinto kwathinta ukuphila okwengeziwe kwesigubhu sina. Okokuqala, ngenxa ngeminako kwesigubhu phansi ayiphethwe ukulungiselela kahle, ngenxa yikuphi 2 kuphela 3 amamitha ukujula kwesilinganiso sayo. Okwesibili, izinkampani akuzona izindawo esikhethekile ukwelashwa amanzi zanikezwa.
ukugcwaliswa kwesigubhu waqala ngo-1972. Lo mbuso waqhubeka ubusa izinsuku 4, ke izakhiwo eziyinkimbinkimbi poostrennyh lapha beza ngokugcwele ukusebenza. Ehlobo lika-1972 amanzi lapha kwaba ezingeni elifanayo njengoba manje. Kuyathakazelisa ukuthi kusukela ngaleso sikhathi kwesigubhu ngenkuthalo esetshenziswa ukubamba inhlanzi, kuya 1990, lapho abangu kuvuna mayelana 10 amathani izinhlanzi.
ngcono embankments kwesigubhu nazo ihlelwe ngo-1975. Ogwini omunye amapaki yakhe ayehlelwe. Ngakho, waxoxa umlando we Voronezh kwesigubhu ukuthi ngokuningiliziwe. Manje kubalulekile ukukhuluma mayelana ohlala ichibi.
Ubani itholakala kwesigubhu?
Yiqiniso, kuyoba mnandi ukwazi ukuthi hlobo luni izilwane uhlala e Voronezh Reservoir. Empeleni, izakhamuzi ngendlela emangalisayo kakhulu. Entwasahlobo futhi ekuqaleni kuka ihlobo esebenzayo zohlobo omiyane. Ezinye izingosi beneaped ayindawo kakhulu lokhu.
Ichibi kutholakala inqwaba izinhlanzi. Ngokuvamile ungathola bream, roach, perch, iphezulu. Futhi whitefish atholakele lapha, utshani carp, carp esiliva nezinye izinhlanzi ukuthi zibanjwa lapha ngenxa abasuka kwamanye amadamu. Kwesigubhu ngokuvamile kungenzeka ukuhlangabezana abadobi.
izinkinga Wanamuhla kwesigubhu
Ngeshwa, ezikhathini zamuva, lokhu emanzini uye wabhekana nezinselele eziningi. Ngokuyinhloko, zingabantu uhlamvu semvelo. Lokhu kungenxa yokuthi ukwakhiwa okusheshayo kwesigubhu akuyona ukwelashwa izindawo ezikhethekile okuye kwalungiselelwa amabhizinisi endawo.
Muva nje, iziphathimandla balalela ngokuthi ichibi futhi afeze izinyathelo letehlukahlukene lokuhloswe ngato ekwenteni kulondolozwe isimo esitebeleni emvelweni kuwo.
Izilwane saseMadagascar: I nezilwane eziyingqayizivele siqhingi
Indlela ukukhetha amahanisi ku inja njengoba nesisekeli ukuba agqoke?
Isitshalo seqanda agazingiwe. appetizer Ungadliwa